ဒီပို့လေးကို ယူထား လိုက် သင့်ဇနီး သင့်ခင်ပွန်း ဘယ်တော့မှ မေဖာက်ပြန် ရဲတော့ဘူး – Zartiman
Zar Ti Man | September 29, 2020 | Knowledge | No Comments
လူဆိုတာ…လိုက်ရင် ပြေးတတ်တဲ့ သဘာဝရှိပါတယ် ။ ကိုယ်က မလိုပဲနဲ့ နေတဲ့အခါ သူက ကိုယ့်နောက်ကို ပြန်လိုက်လာပါလိမ့်မယ် ။အဲ့ဒီ အချိန်ကို လှလှပပ စောင့်ပြီး အောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ ။သစ္စာမဲ့သူကို ပေါင်းခြင်း မပေါင်းခြင်းဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် မှာ မူတည် ပါတယ် ။တကယ်လို့ မတူတဲ့ အမြင်များ ရှိခဲ့ရင် ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်….။ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သူကို ပစ်ထားပြီး ကိုယ့်ကို ကိုယ် ပိုလှအောင်နေပါ.. ဒီစာစောင်လေး ကို ယောကျာ်း မိန်းမ မည်သူမဆို ဖတ်ပေးပါအထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်သည် မိန်းမ များအား အ ကြံပေးစာအရ ရေးသားထားပါတယ် ။ စာရှည်ရင် သည်းခံပြီး ဆုံးအောင်သာ ဖတ်ပေးဖို့ စာရေးပြုစုသူ သိန်းမောင်မောင် မှ အကြံပြု မေ တ္တာရပ်ခံပါရစေ… ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ သတင်းတွေချည်း ကြားကြားနေရလို့လေ…။
ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက် အခြားတစ်ယောက်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင် အသဲနာပြီ ဒေါသတွေထွက် အပြစ်တွေ အပြန်အလှန်တင် ရန်ဖြစ် အ အိပ်ပျက် အစားပျက်ပြီး… ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက်နဲ့ သေချင်လောက်အောင် စိတ်ဆင်းရဲ့ ကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်ကြရပါတယ်..။အချို့ဆို ဘဝပျက် အ နာဂတ်မေ့တဲ့ထိ ဖြစ်ကြတာ တွေရတယ်။ကျွန်နော်အနေနဲ့ အဲ့ဒီလို့ မဖြစ်ကြစေချင်ပါဘူး။ အရေးကြီးတာကတော့ ဖောက်ပြန်ခံရတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် စိတ်ရောရုပ်ပါ ထိခိုက်မှုနည်းပါးစွာနဲ့ အလှမပျက် ဘဝမပျက်ပဲ့ နဲ့ ရှင်သန်နေဖို့ပါပဲ ။သားသမီးတွေ မွေးလိုက်ရတဲ့အခါ သွေတွေအများကြီး ဆုံးရှုံး ခဲ့ရတယ် ကလေးများများယူလေ ရုပ်မြန်မြန်ကျလေ ပါပဲ…။ဒါပေမယ့် မိန်းမတိုင်းရဲ့ မေတ္တာ စိတ်နဲ့ သားသမီးကို သာမက လင်ကိုပါ ကောင်းရာမွန်ရာ အစားသောက်တွေကျွေး ကောင်းမွန် စွာ ဝတ်ဆင်ပေးပြီး ပြုစုရင်း ထိန်းသိမ်းတတ်ကြရပါတယ် ။
ဒါကြောင့်လည်း အချို့မိန်းမတွေက အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ အသားအရည် တွန့်တာ အစားအသောက် မှာလည်း ခြို့ခြံတာတွေ ကလေး ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အိမ်မှုကိစ္စတွေစတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေက အမျိုးသားတွေထက် ပိုခံစားကြရပါတယ် ။အမျိုးသားတွေကျတော့ အိမ်ထောင် သက်ရလာလေ စိုစိုပြေပြေနဲ့ တင့်တယ်လာကြလေ ပါပဲ။ အမျိုးသားတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ အရင်ကထက်ပိုပြီး စိုပြေတင့်တယ် လာတယ် ဆိုရင် သူအမျိုးသမီးရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်ပါ။ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကလည်း အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ပိုလှလာတယ် ပိုတင့်တယ် လာတယ်ဆိုရင် သူ့ အမျိုးသားရဲ့ ကျေးဇူးကြောင်းပါ ။အဲ့ဒီလို ပိုတင့်တယ် လာတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ဘဝ လက်တွဲ့ဖော်ကိုပဲ ငြိးငွေ့သလိုလို စိတ်ကိုပဲ တတ်မက် သလိုလိုနဲ့ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်..။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ တော့……အွန်လိုင်းက တွေ့တဲ့သူတိုင်း ပျိုပျို အိုအို မသိ စိတ်သာယာမှု့ရှာရင်း လူချင်းတွေ့ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်။ အဲ့ဒီအချိန် မှာ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်မထိန်းနိုင်တဲ့ သူတွေ ကျေးဇူးတရား မသိတတ်တဲ့ သူတွေ (ကျား/မ)က ဖောက်ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ အိမ်ထောင် ရေး ဖောက်ပြန်ပြီ ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွဲဖော် ကျေးဇူးရှင် အပေါ် သစ္စာ ဖောက်ခြင်းပါပဲ။ ဒီလို သစ္စာ ဖောက်ခံရပြီဆိုရင်…. ရင်နာကြေကွဲ ဘာလုပ်သင့်သလဲ ဆိုပြီး နီးစပ်ရာကို အကြံဉာဏ် တောင်းယူလေ့ ရှိကြတယ်။ အချို့ကပြောတယ် သစ္စာ မဲ့တဲ့သူ စိတ်ပြန်လည်လာအောင် ပိုပြီး ဂရုစိုက်ပါတဲ့… အချို့ကပြောကြတယ် ဟိုတစ်ယောက်ကို တွေ့ပြီး တောင်းပံကြည့်ပါလားတဲ့…။အချို့ကပြောကြတယ် သားသမီးကို ပိုဂရုစိုက်ပြီး သူတို့ ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် လုပ်ခိုင်းပါတဲ့… အဲဒီနည်းလမ်းတွေဟာ ကျွန်နော့် အမြင်မှာတော့။
ခံရတဲ့သူအတွက် မတရားလှပါဘူး။ သူက အသစ်နဲ့ ပျော်နေချိန်မှာ ကိုယ်က ကလေးတွေကို ထိန်းပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေ နဲ့ အိမ်အလုပ်တွေနဲ့ စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းဏဲစွာ ဖြတ်သန်းရမှာလေ…။ပြီးတော့..စိတ်ညစ်တိုင်း ဘာသာရေးလုပ်တယ် ဆိုဦးတော့ ကိုယ့်က ၂၄ နာရီလုံး ဘာ သာရေးလုပ်ပြီး နေနိုင်သလား နေနိုင် ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့လေ…။ဒါကြောင့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သစ္စာ ဖောက်ခံနေရပြီလို့ ခံစားမိတာနဲ့ အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက သူ့ကို လိုက်စုံစမ်းဖို့ ရန်လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ သူ့ကို မျက်ခြေမပျက် လိုက်ပြီး အခဲခတ်နေရတာလည်း မလို ပါဘူး ဟိုတစ်ယောက်ကို သွားတွေ့ပြီး တောင်းပံစရာလည်း မလိုပါဘူး။ကလေးတွေ မျက်နှာကြည့်ပါ သစ္စာ မဖောက်ပါနဲ့လို့ ကိုယ့်အိမ် ထောင်ဖက်ကို ဒူးထောက် တောင်းပံစရာ မလိုပါဘူး။အဲ့ဒါတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုပြီး ထိခိုက် နစ်နာစေပါတယ် ။
ပြီးတော့ ဒေါသနဲ့ စိတ်ကို မထိန်းနိုင်ဖြစ်ပြီး သူ့ကိုရန်လုပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိခိုက်စေမဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်နေမဲ့အစားကဆင့်မြင့်တဲ့ နည်း လမ်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြင်ဆင်လိုက်ပါ…။ ဒါကြောင့် သစ္စာဖောက် ခံရပြီလို့ သိလိုက်တာနဲ့ အရင်ဆုံး သူ့ကို ဂရုစိုက် ခဲ့တာတွေ ပေးဆပ် အ နစ်နာခံခဲ့တာတွေ အားလုံးကို လုံးဝ ရပ်ပစ်လိုက်ပါ…။ပစ်ထားလိုက်ပါ ပစ်ထားခြင်းဆိုတာကလည်း ဥပေက္ခာပြုခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ ။သူ့အ ကြောင်းစဉ်းစားပြီး စိတ်ညစ်နေမဲ့အစား မစဉ်းစားပဲနဲ့ ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ဖို့ကိုပြောင်းပြီး စဉ်းစားလိုက်ပါ။သူ့ရဲ့ သစ္စာမဲ့မှုကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ရော ရုပ်ပါ အထိအခိုက်ခံနေမဲ့အစား သူကို ပိုဂရုစိုက်ပြီး သူ့ရှေ့မှာ ဒူးထောက်နေမဲ့အစား ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုချစ်ပြီး ပိုကောင်းလာအောင် အရည်ချင်းတွေ တက်လာအောင် လုပ်လိုက်ပါ..။သစ္စာဖောက်တဲ့ နွားကို စားကောင်း သောက်ဖွယ်တွေ ချက်ပြုတ်ပေးစရာမလိုပါဘူး ။
သားသမီးတွေနဲ့အတူတူ အစားအသောက် ကောင်းကောင်းစားပါ ၊ Shipping ထွက်ပြီး စိတ်ပျော်အောင် နေပါ… ခန္ဓာ ကိုယ်ကို ပြန်ထိန်းပါ လှအောင်ပြင်ဆင်ပြီ ဆိုတာနဲ့တင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွ လန်းဆန်းမှု ဖြစ်စေပါတယ် ။အစားအသောက်ကို ကောင်းကောင်းစားပါ။ (အဝလွန်မည့် အစားသောက်တွေတော့ ရှောင်ပါ ။ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ဂရုတစိုက်ဝတ်ပါ) ကျန်းမာရေးနဲ့ အသားအရည်ပိုကောင်းအောင် အစားအသောက် ဂရုစိုက်ပါ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပိုတွေ့ပြီး ရယ်စရာတွေ ပြောပါ…အဲ့ဒီလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လန်းဆန်းလာပြီ ဆို ရင်တော့ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အရည်အသွေး တိုးတက်စေမည့် ကိစ္စ တွေ ဆောင်ရွက်ပါ။သင်တန်းတွေ တက်ချင်ရင်လည်း တက်ပါ …ပညာသင် တယ်ဆို တာ အရွယ် အကန့်သတ် မရှိပါဘူး။ကိုယ့်အရည်ချင်း တိုးတက်လာလေ ယုံကြည်မှုပိုရှိပြီး ဘဝမှာ နေလို့ထိုင်လို့ ကောင်းလာလေပါပဲ့။
အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့ တစ်ဖက်ကလည်း ကိုယ့်အလုပ်ထဲ့မှာ အလုပ် ကို ပိုအာရုံစိုက်လို့ အောင်မြင်မှု ရလာရင်လည်း ကိုယ့်ဘဝကို ကျေနပ်ပြီ ဘဝကို နေပျော်လာပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက် ဖွဲ့ဖြိုးမှုဟာ သားသမီးတွေ အတွက်ရော ကိုယ့် အတွက်ပါ ခွန်အားရော အင်အားပါ ဖြစ်စေ မှာပါ။သားသမီးတွေကလည်း စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ငိုနေမဲ့ အမေမျိုးထက် ထက်ထက်မြတ်မြတ်နဲ့ အရာရာကို တည်ငြိမ်လှပစွာ ရင်ဆိုင် ဖြတ် သန်းမဲ့ အမေမျိုးကို ပိုလိုလား ကြပါတယ်။ဖောက်ပြန်ခံရပေမဲ့ အရှုံးမပေး ၊ စိတ်ဓာတ်မကျပဲနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရော ဘဝကိုပါ အရင်ကထက် ပိုလှအောင် နေပါလို့ ပြောချက်ပါတယ်။ရုပ်တင်မက စိတ်နဲ့ ဘဝပါ လှအောင် ကြိုးစားပြောင်းလဲဖို့ အကြံပြု တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ခုလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲခြင်းဟာ သစ္စာ ဖောက်သူအပေါ် ကလေ့စားချေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး ။
ကိုယ်ကလည်း နောက်အသစ်တစ်ယောက်နဲ့ ပျော်ပါးဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။သစ္စာ ဖောက်တဲ့ သူအတွက် စိတ်နဲ့ ရုပ်သာမက အနာဂတ်ကိုပါ အ ထိခိုက်မခံပဲနဲ့ လှလှပပ ကျော့ကျော့ မော့မော့နဲ့ ဖြတ်သန်း ကြစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘဝကို လှပအောင် ဖန်တီးဖို့အတွက် ကိုယ့်မှာ တာ ဝန်အရှိဆုံးပါ ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကို တန်းဖိုးထားပြီး ရင်ဆိုင်ပါ။သစ္စာဖောက်ခံရပေမဲ့ ဘဝကို အရှုံးအပေးဘဲနဲ့ တိုးတက်စွာနဲ့ အောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်း နေစေချင်တာပါ။ ဒီနေရာမှာ ယောကျာ်းရဲ့ ဝင်ငွေကို မှီခိုနေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့လည်း ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ခင်ပွန်း ကို ငွေကြောင်း သည်းခံပြီး ကြိပ်မှိတ် ပေါင်းနေရမဲ့ အစားကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေ ရရှိအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။အချို့က ထင်ကြပါတယ် ကိုယ့်က စွန့်လွတ်လိုက်ရင် ဟိုမယားငယ်က ပိုပျော်မှာပေါ့လို့ ယူဆကြပါတယ် အဲ့ဒီအယူအဆ အမြဲတမ်း မမှန်ပါဘူး။
လူဆိုတာ…လိုကျရငျ ပွေးတတျတဲ့ သဘာဝရှိပါတယျ ။ ကိုယျက မလိုပဲနဲ့ နတေဲ့အခါ သူက ကိုယျ့နောကျကို ပွနျလိုကျလာပါလိမျ့မယျ ။အဲ့ဒီ အခြိနျကို လှလှပပ စောငျ့ပွီး အောငျမွငျစှာ ဖွတျသနျးလိုကျပါ ။သစ်စာမဲ့သူကို ပေါငျးခွငျး မပေါငျးခွငျးဆိုတာ ကိုယျ့ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ အပျေါ မှာ မူတညျ ပါတယျ ။တကယျလို့ မတူတဲ့ အမွငျမြား ရှိခဲ့ရငျ ဆှေးနှေးဖို့ ဖိတျချေါပါတယျ….။ဖောကျပွနျတတျတဲ့သူကို ပဈထားပွီး ကိုယျ့ကို ကိုယျ ပိုလှအောငျနပေါ.. ဒီစာစောငျလေး ကို ယောကျြား မိနျးမ မညျသူမဆို ဖတျပေးပါအထူးသဖွငျ့ အိမျထောငျသညျ မိနျးမ မြားအား အ ကွံပေးစာအရ ရေးသားထားပါတယျ ။ စာရှညျရငျ သညျးခံပွီး ဆုံးအောငျသာ ဖတျပေးဖို့ စာရေးပွုစုသူ သိနျးမောငျမောငျ မှ အကွံပွု မေ တ်တာရပျခံပါရစေ… ဖောကျပွနျတတျတဲ့ သတငျးတှခေညျြး ကွားကွားနရေလို့လေ…။
ခဈြသူ အိမျထောငျဖကျ အခွားတဈယောကျနဲ့ ဖောကျပွနျနပွေီဆိုရငျ အသဲနာပွီ ဒေါသတှထှေကျ အပွဈတှေ အပွနျအလှနျတငျ ရနျဖွဈ အ အိပျပကျြ အစားပကျြပွီး… ရုပျပကျြ ဆငျးပကျြနဲ့ သခေငျြလောကျအောငျ စိတျဆငျးရဲ့ ကိုယျဆငျးရဲ ဖွဈကွရပါတယျ..။အခြို့ဆို ဘဝပကျြ အ နာဂတျမတေဲ့ထိ ဖွဈကွတာ တှရေတယျ။ကြှနျနျောအနနေဲ့ အဲ့ဒီလို့ မဖွဈကွစခေငျြပါဘူး။ အရေးကွီးတာကတော့ ဖောကျပွနျခံရတဲ့အခါ ကိုယျ့အတှကျ စိတျရောရုပျပါ ထိခိုကျမှုနညျးပါးစှာနဲ့ အလှမပကျြ ဘဝမပကျြပဲ့ နဲ့ ရှငျသနျနဖေို့ပါပဲ ။သားသမီးတှေ မှေးလိုကျရတဲ့အခါ သှတှေအေမြားကွီး ဆုံးရှုံး ခဲ့ရတယျ ကလေးမြားမြားယူလေ ရုပျမွနျမွနျကလြေ ပါပဲ…။ဒါပမေယျ့ မိနျးမတိုငျးရဲ့ မတ်ေတာ စိတျနဲ့ သားသမီးကို သာမက လငျကိုပါ ကောငျးရာမှနျရာ အစားသောကျတှကြှေေး ကောငျးမှနျ စှာ ဝတျဆငျပေးပွီး ပွုစုရငျး ထိနျးသိမျးတတျကွရပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့လညျး အခြို့မိနျးမတှကေ အသကျရလာတာနဲ့အမြှ အသားအရညျ တှနျ့တာ အစားအသောကျ မှာလညျး ခွို့ခွံတာတှေ ကလေး ငယျငယျလေးနဲ့ အိမျမှုကိစ်စတှစေတဲ့ စိတျဖိစီးမှုတှကေ အမြိုးသားတှထေကျ ပိုခံစားကွရပါတယျ ။အမြိုးသားတှကေတြော့ အိမျထောငျ သကျရလာလေ စိုစိုပွပွေနေဲ့ တငျ့တယျလာကွလေ ပါပဲ။ အမြိုးသားတဈယောကျ အိမျထောငျကပြွီးမှ အရငျကထကျပိုပွီး စိုပွတေငျ့တယျ လာတယျ ဆိုရငျ သူအမြိုးသမီးရဲ့ ကြေးဇူးကွောငျ့ပါ။ အမြိုးသမီး တဈယောကျကလညျး အိမျထောငျကပြွီးမှ ပိုလှလာတယျ ပိုတငျ့တယျ လာတယျဆိုရငျ သူ့ အမြိုးသားရဲ့ ကြေးဇူးကွောငျးပါ ။အဲ့ဒီလို ပိုတငျ့တယျ လာတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့ဘဝ လကျတှဲ့ဖျောကိုပဲ ငွိးငှသေ့လိုလို စိတျကိုပဲ တတျမကျ သလိုလိုနဲ့ ဖွဈတတျကွပါတယျ..။
ဒီနခေ့တျေမှာ တော့……အှနျလိုငျးက တှတေဲ့သူတိုငျး ပြိုပြို အိုအို မသိ စိတျသာယာမှု့ရှာရငျး လူခငျြးတှဖေို့ ကွိုးစားကွတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျ မှာ ကိုယျ့စိတျကို ကိုယျမထိနျးနိုငျတဲ့ သူတှေ ကြေးဇူးတရား မသိတတျတဲ့ သူတှေ (ကြား/မ)က ဖောကျပွနျတတျကွပါတယျ။ အိမျထောငျ ရေး ဖောကျပွနျပွီ ဆိုတာ ကိုယျ့ရဲ့ လကျတှဲဖျော ကြေးဇူးရှငျ အပျေါ သစ်စာ ဖောကျခွငျးပါပဲ။ ဒီလို သစ်စာ ဖောကျခံရပွီဆိုရငျ…. ရငျနာကွကှေဲ ဘာလုပျသငျ့သလဲ ဆိုပွီး နီးစပျရာကို အကွံဉာဏျ တောငျးယူလေ့ ရှိကွတယျ။ အခြို့ကပွောတယျ သစ်စာ မဲ့တဲ့သူ စိတျပွနျလညျလာအောငျ ပိုပွီး ဂရုစိုကျပါတဲ့… အခြို့ကပွောကွတယျ ဟိုတဈယောကျကို တှပွေီ့း တောငျးပံကွညျ့ပါလားတဲ့…။အခြို့ကပွောကွတယျ သားသမီးကို ပိုဂရုစိုကျပွီး သူတို့ ကိုယျ့ဘကျပါအောငျ လုပျခိုငျးပါတဲ့… အဲဒီနညျးလမျးတှဟော ကြှနျနေျာ့ အမွငျမှာတော့။
ခံရတဲ့သူအတှကျ မတရားလှပါဘူး။ သူက အသဈနဲ့ ပြျောနခြေိနျမှာ ကိုယျက ကလေးတှကေို ထိနျးပွီး စိတျဖိစီးမှုတှေ နဲ့ အိမျအလုပျတှနေဲ့ စိတျဆငျးရဲ ကိုယျဆငျးဏဲစှာ ဖွတျသနျးရမှာလေ…။ပွီးတော့..စိတျညဈတိုငျး ဘာသာရေးလုပျတယျ ဆိုဦးတော့ ကိုယျ့က ၂၄ နာရီလုံး ဘာ သာရေးလုပျပွီး နနေိုငျသလား နနေိုငျ ရငျတော့ အကောငျးဆုံးပေါ့လေ…။ဒါကွောငျ့ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ သစ်စာ ဖောကျခံနရေပွီလို့ ခံစားမိတာနဲ့ အရငျဆုံးလုပျရမှာက သူ့ကို လိုကျစုံစမျးဖို့ ရနျလုပျဖို့ မလိုပါဘူး။ သူ့ကို မကျြခွမေပကျြ လိုကျပွီး အခဲခတျနရေတာလညျး မလို ပါဘူး ဟိုတဈယောကျကို သှားတှပွေီ့း တောငျးပံစရာလညျး မလိုပါဘူး။ကလေးတှေ မကျြနှာကွညျ့ပါ သစ်စာ မဖောကျပါနဲ့လို့ ကိုယျ့အိမျ ထောငျဖကျကို ဒူးထောကျ တောငျးပံစရာ မလိုပါဘူး။အဲ့ဒါတှကေ ကိုယျ့ကိုယျကို ပိုပွီး ထိခိုကျ နဈနာစပေါတယျ ။
ပွီးတော့ ဒေါသနဲ့ စိတျကို မထိနျးနိုငျဖွဈပွီး သူ့ကိုရနျလုပျပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို ထိခိုကျစမေဲ့ အလုပျတှေ လုပျနမေဲ့အစားကဆငျ့မွငျ့တဲ့ နညျး လမျးနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွငျဆငျလိုကျပါ…။ ဒါကွောငျ့ သစ်စာဖောကျ ခံရပွီလို့ သိလိုကျတာနဲ့ အရငျဆုံး သူ့ကို ဂရုစိုကျ ခဲ့တာတှေ ပေးဆပျ အ နဈနာခံခဲ့တာတှေ အားလုံးကို လုံးဝ ရပျပဈလိုကျပါ…။ပဈထားလိုကျပါ ပဈထားခွငျးဆိုတာကလညျး ဥပက်ေခာပွုခွငျး တဈမြိုးပါပဲ ။သူ့အ ကွောငျးစဉျးစားပွီး စိတျညဈနမေဲ့အစား မစဉျးစားပဲနဲ့ ကိုယျ့ဘဝတိုးတကျဖို့ကိုပွောငျးပွီး စဉျးစားလိုကျပါ။သူ့ရဲ့ သစ်စာမဲ့မှုကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ စိတျရော ရုပျပါ အထိအခိုကျခံနမေဲ့အစား သူကို ပိုဂရုစိုကျပွီး သူ့ရှမှေ့ာ ဒူးထောကျနမေဲ့အစား ကိုယျ့ကိုယျကို ပိုခဈြပွီး ပိုကောငျးလာအောငျ အရညျခငျြးတှေ တကျလာအောငျ လုပျလိုကျပါ..။သစ်စာဖောကျတဲ့ နှားကို စားကောငျး သောကျဖှယျတှေ ခကျြပွုတျပေးစရာမလိုပါဘူး ။
သားသမီးတှနေဲ့အတူတူ အစားအသောကျ ကောငျးကောငျးစားပါ ၊ Shipping ထှကျပွီး စိတျပြျောအောငျ နပေါ… ခန်ဓာ ကိုယျကို ပွနျထိနျးပါ လှအောငျပွငျဆငျပွီ ဆိုတာနဲ့တငျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ တကျကွှ လနျးဆနျးမှု ဖွဈစပေါတယျ ။အစားအသောကျကို ကောငျးကောငျးစားပါ။ (အဝလှနျမညျ့ အစားသောကျတှတေော့ ရှောငျပါ ။ ဝတျစားဆငျယငျမှု ဂရုတစိုကျဝတျပါ) ကနျြးမာရေးနဲ့ အသားအရညျပိုကောငျးအောငျ အစားအသောကျ ဂရုစိုကျပါ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပိုတှပွေီ့း ရယျစရာတှေ ပွောပါ…အဲ့ဒီလို စိတျပိုငျးဆိုငျရာ လနျးဆနျးလာပွီ ဆို ရငျတော့ ကိုယျ့ဘဝရဲ့ အရညျအသှေး တိုးတကျစမေညျ့ ကိစ်စ တှေ ဆောငျရှကျပါ။သငျတနျးတှေ တကျခငျြရငျလညျး တကျပါ …ပညာသငျ တယျဆို တာ အရှယျ အကနျ့သတျ မရှိပါဘူး။ကိုယျ့အရညျခငျြး တိုးတကျလာလေ ယုံကွညျမှုပိုရှိပွီး ဘဝမှာ နလေို့ထိုငျလို့ ကောငျးလာလပေါပဲ့။
အဲ့ဒီလိုလုပျရငျးနဲ့ တဈဖကျကလညျး ကိုယျ့အလုပျထဲ့မှာ အလုပျ ကို ပိုအာရုံစိုကျလို့ အောငျမွငျမှု ရလာရငျလညျး ကိုယျ့ဘဝကို ကနြေပျပွီ ဘဝကို နပြေျောလာပါတယျ။ကိုယျ့ရဲ့ တိုးတကျ ဖှဲ့ဖွိုးမှုဟာ သားသမီးတှေ အတှကျရော ကိုယျ့ အတှကျပါ ခှနျအားရော အငျအားပါ ဖွဈစေ မှာပါ။သားသမီးတှကေလညျး စိတျဓာတျကပြွီး ငိုနမေဲ့ အမမြေိုးထကျ ထကျထကျမွတျမွတျနဲ့ အရာရာကို တညျငွိမျလှပစှာ ရငျဆိုငျ ဖွတျ သနျးမဲ့ အမမြေိုးကို ပိုလိုလား ကွပါတယျ။ဖောကျပွနျခံရပမေဲ့ အရှုံးမပေး ၊ စိတျဓာတျမကပြဲနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ရော ဘဝကိုပါ အရငျကထကျ ပိုလှအောငျ နပေါလို့ ပွောခကျြပါတယျ။ရုပျတငျမက စိတျနဲ့ ဘဝပါ လှအောငျ ကွိုးစားပွောငျးလဲဖို့ အကွံပွု တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ခုလို ကိုယျ့ကိုယျကို ပွောငျးလဲခွငျးဟာ သစ်စာ ဖောကျသူအပျေါ ကလစေ့ားခဖြေို့ မဟုတျပါဘူး ။
ကိုယျကလညျး နောကျအသဈတဈယောကျနဲ့ ပြျောပါးဖို့ မဟုတျပါဘူး။သစ်စာ ဖောကျတဲ့ သူအတှကျ စိတျနဲ့ ရုပျသာမက အနာဂတျကိုပါ အ ထိခိုကျမခံပဲနဲ့ လှလှပပ ကြော့ကြော့ မော့မော့နဲ့ ဖွတျသနျး ကွစခေငျြပါတယျ။ ကိုယျ့ဘဝကို လှပအောငျ ဖနျတီးဖို့အတှကျ ကိုယျ့မှာ တာ ဝနျအရှိဆုံးပါ ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကို တနျးဖိုးထားပွီး ရငျဆိုငျပါ။သစ်စာဖောကျခံရပမေဲ့ ဘဝကို အရှုံးအပေးဘဲနဲ့ တိုးတကျစှာနဲ့ အောငျမွငျစှာ ဖွတျသနျး နစေခေငျြတာပါ။ ဒီနရောမှာ ယောကျြားရဲ့ ဝငျငှကေို မှီခိုနရေတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ အနနေဲ့လညျး ဖောကျပွနျနတေဲ့ ခငျပှနျး ကို ငှကွေောငျး သညျးခံပွီး ကွိပျမှိတျ ပေါငျးနရေမဲ့ အစားကိုယျပိုငျဝငျငှေ ရရှိအောငျ ကွိုးစားသငျ့ပါတယျ။အခြို့က ထငျကွပါတယျ ကိုယျ့က စှနျ့လှတျလိုကျရငျ ဟိုမယားငယျက ပိုပြျောမှာပေါ့လို့ ယူဆကွပါတယျ အဲ့ဒီအယူအဆ အမွဲတမျး မမှနျပါဘူး။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းများ ၏ ဆက်သွယ်နိုင်သော ဖုန်းနံပါတ်များ…(ရှယ်ပေးကြ ပါခင်ဗျာ)
ကျောင်းဆရာမအများစု ဘာကြောင့် အိမ်ထောင် မပြုကြ တာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း
Facebook သုံးနေ တဲ့ မိန်း ကလေး များ အထူးသီးသန့် ဖတ်ရန်…